Nhau dzeBhaibheri: Kuvimba Nebetsero yaMwari - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Vanhu vanenge 50 000 vanofamba rwendo rwurefu vachibva Bhabhironi vachienda Jerusarema. Asi pavanosvika, Jerusarema rinongova zidongo. Hamuna anogaramo. VaIsraeri vanotofanira kuvakazve chinhu chiri chose pose pose.
Chimwe chezvinhu zvokutanga zvavanovaka iartari. Ndiyo nzvimbo yavangaitira zvipiriso zvemhuka, kana zvipo, kuna Jehovha. Mwedzi mishoma pashure vaIsraeri vanovamba kuvaka tembere. Asi vavengi vagere munyika dziri pedyopo havadi kuti vaIsraeri vaivake. Saka vanoedza kuvatyisidzira kuvaregedzesa. Pakupedzisira, vavengi ava vanoita kuti mambo mutsva wePersia aite mutemo wokumisa basa rokuvaka.
Makore anopfuura. Zvino ava makore 17 chifo chokudzokera kwavaIsraeri kubva Bhabhironi. Jehovha anotuma vaprofita vake Hagai naZekaria kuzoudza vanhu kuvamba kuvakazve. Vanhu vanovimba nebetsero yaMwari, uye vanoterera vaprofita. Vanotanga kuvakazve, kunyange mutemo uchiti havafaniri kukuita.
Zvino mukuru wePersia Tatenai anosvika ndokubvunza vaIsraeri maruramiro avanawo okuvaka tembere. VaIsraeri vanomuudza kuti pavaiveri muBhabhironi, Mambo Koreshi akavaudza kuti: 'Endai, zvino, kuJerusarema mugovaka tembere yaJehovha, Mwari wenyu.'
Tatenai anotumira tsamba Bhabhironi achibvunza kana Koreshi, uyo zvino afa, akataura izvozvo chaizvoizvo. Nokukurumidza tsamba inobva kuna mambo mutsva wePersia inodzoka. Inozivisa kuti Koreshi akakutaura chaizvoizvo. Nokudaro mambo anonyora kuti: 'VaIsraeri ngavavake tembere yaMwari wavo. Uye ndinokurairai kuvabetsera.' Muanenge makore mana tembere inopera, uye vaIsraeri vanofarisisa.
Mamwe makore mazhinji anopfuura. Zvino ava anenge makore 48 chifo chapakapera tembere. Vanhu vari muJerusarema varombo, uye guta netembere yaMwari hazviratidziki zvakatsvinda kwazvo. Shure muBhabhironi, Ezra muIsraeri anonzwa nezvedikanwo yokugadziridza tembere yaMwari. Zvino unoziva here chaanoita?
Ezra anondoona Artashasta, mambo wePersia, uye uyu mambo akanaka anopa Ezra zvipo zvizhinji zvokudzoka nazvo Jerusarema. Ezra anokumbira vaIsraeri vari muBhabhironi kumubetsera kuendesa zvipo izvi Jerusarema. Vanhu vanenge 6 000 vanoti vachaenda. Vane sirivha nendarama zhinji nezvinhu zvinokosha zvokuenda nazvo.
Ezra anonetsekana, nokuti munziramo muna vanhu vakaipa. Vanhu ava vangabvuta sirivha yavo nendarama, ndokuvauraya. Saka Ezra anodanira vanhu pamwe chete, sezvaungaona mumufananidzo. Ipapo vanonyengetera kuna Jehovha kuvadzivirira parwendo rwurefu rwavo rwokudzokera Jerusarema.
Jehovha anovadzivirira chaizvo. Pashure pokufamba mwedzi mina, vanosvika vakakotsekana muJerusarema. Ko ikoku hakuratidziri here kuti Jehovha anogona kudzivirira avo vanovimba naye nokuda kwebetsero?
Ezra ganhuro 2 kusvikira ku-8.
Vanhu vangani vanoita rwendo rurefu rwokubva kuBhabhironi kuenda kuJerusarema, asi chii chavanowana pavanosvika?
VaIsraeri vanotanga kuvakei vasvika, asi vavengi vavo vanoitei?
Hagai naZekaria ndivanaani, uye vanoudza vanhu chii?
Nei Tatenai achitumira tsamba kuBhabhironi, uye anogamuchira mhinduro yokuti chii?
Ezra anoitei paanoziva kuti temberi yaMwari inoda kugadzirwa?
Ezra ari kunyengeterera chii mumufananidzo uyu, munyengetero wake unopindurwa sei, uye izvi zvinotidzidzisei?
Verenga Ezra 3:1-13.
Kana tikazombozviwana tava munharaunda isina ungano yevanhu vaMwari, chii chatinofanira kuramba tichiita? (Ezra 3:3, 6; Mab. 17:16, 17; VaH. 13:15)
Verenga Ezra 4:1-7.
Muenzaniso wei uyo Zerubhabheri akaratidza nokuda kwevanhu vaJehovha pamusoro pokunamata nezvimwe zvitendero? (Eks. 34:12; 1 VaK. 15:33; 2 VaK. 6:14-17)
Verenga Ezra 5:1-5, 17 uye 6:1-22.
Nei vashori vasina kukwanisa kumisa basa rokuvaka temberi? (Ezra 5:5; Isa. 54:17)
Zvakaitwa nevakuru vevaJudha zvinokurudzira sei vakuru vechiKristu kutsvaka utungamiriri hwaJehovha pavanotarisana nevashori? (Ezra 6:14; Pis. 32:8; VaR. 8:31; Jak. 1:5)
Verenga Ezra 8:21-23, 28-36.
Tisati tatanga kuita chimwe chinhu, muenzaniso upi waEzra ungava wakanaka kuti titevedzere? (Ezra 8:23; Pis. 127:1; Zvir. 10:22; Jak. 4:13-15)